သစ်သီးဝလံ/ဟင်းသီးဟင်းရွက်အခြောက်ခံတဲ့စက် | Vootee
အစားအသောက်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် မှိုပါဝင်မှုနှုန်းကို လျှော့ချရန် အတွက် Dryerအခြောက်ခံစက်များ
ယနေ့ မြန်မာပြည်ရှိ အစားအသောက်အများစုတွင် မှိုများစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိပြီး ၊ ထိုမှိုများသည် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့မှိုများကိုဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ စိုထိုင်းစ များပါဝင်နေ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆန်စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ပဲမျိုးစုံ ၊ ငါးခြောက် စသော အစားအသောက် ထုတ်လုပ်သော နေရာများတွင် နေပူလှမ်းခြင်းထက် Dryer အခြောက်ခံစက် ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် မှိုများကို လုံးဝကင်းစင်စေပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် အရေအသွေး အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ဖြစ်ပါသည်။
(မိမိလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ရန် Model မျိုးစုံရှိပါသည်။)
ပုံပါမြင်တွေ့ရသော စက်ကို (Heating Dryer) သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် အခြောက်သောစက်ဟုခေါ်ပါသည်။ ယင်းစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (ကြက်သွန်ဖြူ၊ မြေပဲ၊ စပါး၊ နှံစားပြောင်း၊ ပြောင်းဆန်၊ လင်ငန်းသီး၊ ဆန်ခေါက်ဆွဲ၊ ငါး) တို့ကိုတိုက်ရိုက်အခြောက်ခံနိုင်ပါသည်။ သီးနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အခြောက်ခံပေး
This entry was posted in Business and tagged ဝလ, သ, သစ, ဟင, ရ. Bookmark the permalink.
← ပတ်လည် သီးနှံအခြောက်ခံသည့်စက် (Circulating Grain Dryer) F500
HiTi P110S Photo Printer →
Myanmar Agriculture Machines - CP131 7HP-16HP Diesel Hand Walking Tractor ထွန်စက်